Puntland oo ka hor-timid xeer ay dhowaan ansixisay DF Soomaaliya – Balcad.com Teyteyleey
Wasiiru dowlaha Warfaafinta, Isgaarsiinta, hiddaha iyo dhaqanka Puntland C/fitaax Nuur Axmed (Ashkir) ayaa shir Saxaafadeed uu maanta ku qabtay Garoowe, wuxuu ku sheegay in dowladda Puntland ayan qayb ka ahayn Xeerka Isgaarsiinta federaalka ee laga ansixiyay golaha Wasiirada Federaalka maalintii khamiista ahayd Ee la soo dhaafay bushuna ahayd 21-kii bishaan socota.
Wasiiru dowluhu Wuxuu sheegay in loo baahnaa ka hor intaan la ansixin xeerka in lagala tashado dowlaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, waxaana uu ku tilmaamay talaabadaasi mid baal-marsan Dastuurka iyo Dowlad nimada Soomaaliyeed.
“Sida ku cad Distuurka Federaalka ah qodobkiisa 54-Aad Awoowdaha dowladda Federaalka ah waa: difaaca Qaranka, Jinsiyadda, Xiriirka dibadda, wixii intaa ka soo hara sida Dastuurka Federaalka ahba uu qeexayo, way u madax bannaanyihiin dowlad goboleedyadu in ay aayahooda ka tashadaan, Xeerkaana waa mid loo baahnaa in Puntland laga war-galiyoâ” ayuu yiri Wasiiru Dowluhu.
Dhinaca kale Wasiir Ashkir waxa uu sheegay in ay Wasaaradda Warfaafinta iyo Isgaarsiinta Puntland ay ku hawlanayd talo ka bixinta Xeerkaan, khuburo Wasaaradda ka tirsanna u saartay turxaan-bixinta Xeerkaan qodobbo Muhiim Ahna ay soo tilmaameen in wax laga baddalo.
The post Puntland oo ka hor-timid xeer ay dhowaan ansixisay DF Soomaaliya appeared first on Ilwareed Online.